Mmezu weebụ - Promoearte
Home Mmezu weebụ
CI proponiamo di raccogliere costurire e gestire siti web di realtà che a livello locale, Ha na-eme na ntụziaka nke na-akwado ma na-akwado oru ngo na omenala ọdịnaya na-agakwuru ka anyị amụma n'ihi na nkwalite :
Dell 'crafts na-ahụkarị obodo ngwaahịa,
nke obere azụmahịa na kpọmkwem ahịa,
njikere na-akwado omenala atumatu, ebe obibi, na-elekọta mmadụ na akwalite ọdịmma ndị mmadụ nọ n'ókèala.
Dell 'nzukọ nke azụmahịa ihe, Art na music.
Nke a bụ counterpart ka usoro mgbasa ozi nke anyị nkwa na mpaghara ebe.
Ike saịtị, Modern, ìhè, kachasị na-egosipụta n'ụzọ ziri ezi na mobile ngwaọrụ, ejikọrọ na-elekọta mmadụ netwọk, mfe jisiri site gị site na akara panel, SEO njikarịcha, Statistics, akwụkwọ akụkọ
Na saịtị na E-azụmahịa ngwọta maka online ahịa
Anyị na-enye anyị ahụmahụ na-webdesign, e la possibilità di rendersi visibili all’ interno di una ọhụrụ mpaghara na netwọk dị n'ókèala 'Alto Milanese supportata attraveso i Social Network, web 2.0, na mobile ngwa.
Anyị na-guzosie ike a na mpaghara na netwọk (Obodo Area Network) na 56 municipalities emetụta 'ebe a na-akpọ Alto Milanese , oru ngo ga-gụnyere ọtụtụ obodo, nkwalite ozu, ọha entities, onwe ụlọ ọrụ, ọrụ nke ọ bụla ụdị, ị nwere ike nweta ihe a niile ekele na ẹkenọde site ọhụrụ teknụzụ.
Ụfọdụ n'ime saịtị mere:
Network anọkwaghị n'ógbè
mkpụrụ obi Sensi (nkwarụ)
June 9, 2020 na 10:10 am
Zọpụta aha m, ozi-e, na saịtị URL na ihe nchọgharị m maka oge ọzọ m ga-aza ajụjụ.
Nzuzo uwe ojii
ghọtara site Akon&art
Kwadoro site na Tempera & WordPress.